ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ဦး Kiss ၏အဓိပ္ပာယ်
နမ်းခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်ကို? ဆက်ဆံရေးကိုအတွက်ဒေါ်လာသန်းမေးခွန်း. ငါသည်သင်တို့ကိုသင်၌ရှိကြ၏ဆက်ဆံရေး၏အခြေအနေနှင့်သင်နှင့်အတူဆက်ဆံရေး၌ရှိကြ၏လူတစ်ဦး၌ထည့်ဖို့လိုပါတယ်ထင်. သင်သည်အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိသာအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်နိုင်မယ့်ဆက်ဆံရေးအသစ်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကအထစ်ဆက်ဆံရေးအတွက်မူကားသင်တို့နှင့်အတူအဖွင်လူတစ်ဦး၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုကအရမ်းသူတို့ကိုဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာနှင့်အတူလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်မယ်ဆိုရင်. ထိုဘုနျး၏အမျိုးမျိုးသောအဓိပ္ပါယ်တွေကိုကြည့်ရှိသည်ကြရအောင်, သို့မဟုတ်မဘုန်းပွင့်, နမ်း.
သင့်ရဲ့မေတ္တာကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, tactile အမျိုးအစား သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်အလွန်ပျော်ရွှင်အနမ်းပွင်အတွက်မိုးခဲ့လိမ့်မည်! အဟောင်းကိုရင်ခုန်စရာအလေးအနက်မေတ္တာကိုယူပြီးသူတို့ရဲ့အနမ်းပွင်နွေးထွေးမှုနှင့်ပြည့်ဝလိမ့်ဦးမည်, စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ချစ်ခြင်း. ဒါကြောင့်ကိုခင်တွယ်ပေမယ့်နောက်ကျောကသူတို့ကိုန့်အသတ်ချစ်ခင်ပြသနိုင်ဖို့သေချာပါစေ. အားထုတ်စေသင်ကိုယ်တိုင်သဘာဝတရားတွင်အများဆုံးရင်ခုန်စရာမဟုတ်သည့်တိုင် အကယ်.. စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အမျိုးအစားကဆက်ဆံရေးအသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်ပေမယ်ဆက်ဆံရေးကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ဖြစ်စဉ်များအဖြစ်သူတို့၏အနမ်းပွင် ပို. ပို. အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဖြစ်လာပါလိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ်ကိုဤကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်.
ကရဲ​​့စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်တပ်မက်ခြင်းကိလေသာအမျိုးအစားဆားတစ်ဦးဖြစ်တော့ဖြင့်ယူပေမယ်မည်သို့ပင်ဆိုစေခံစားကြရဖြစ်ကြ၏! အချိန်ကအဲဒီအနမ်းပွင်အပေါ်သွားနှင့်အမျှဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုလေးနက်သောရရှိသွားတဲ့လျှင်ကိုချစ်ရန်တပ်မက်ခြင်းကိလေသာမှလွှဲသွားလိမ့်မည်ဟု. ကိုယ့်ကြောင့်အချိန်ပေး. တပ်မက်ခြင်းကိလေသာအမျိုးအစား၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာစေသော်လည်းသင်တို့သည်သူတို့အဘို့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏သောအခါသင်တို့သည်ဧကန်အမှန်အကြောင်းကိုသိစေတော်မူမည်သူတို့ရဲ့အချိန်ကြာ! ထိုသူတို့၏နမ်းကြတလမ်းတည်းဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်!
အပြည့်အဝ-On ရှိနေဆဲဟုထံမှအနမ်းပွင်အမျိုးအစားအမြောက်အမြားရှိပါတယ်, ပျော့ဖို့စိတ်အားထက်သန်သောနမ်းခြင်း, နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနမ်းခြင်း. ချစ်ခင်စုံမက်၏ချစ်ခင်ကြင်နာမှုနှင့်ပုဂ္ဂလိကပြပွဲများကိုအများပြည်သူပြပွဲရှိပါတယ်.
စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူ brimming အပြည့်အဝ-On နမ်းစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာ၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုသင်တို့အဘို့ချန်ခြွင်းမပေးချင်ပါဘူးထိုကာလဘို့သင့်ကိုနှစ်ဦးစလုံးရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာအဘယ်မှာရှိပါကအစားပြင်းထန်သောနဲ့လှပတဲ့ဖြစ်ပါသည်, တခဏခြင်းတွင်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားနှင့်နက်ရ​​ှိုင်းစွာနမ်း၏တန်ခိုးအားဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသော.
ပျော့, နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနမ်းခြင်းမေတ္တာတော်ကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်စုံတွဲသောအများကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကကိုးရိုးကားရားနှင့်မသေချာသေးကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဒီကြီးမားတဲ့အခိုက်ဘယ်လိုချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မည်သူတို့ကအတူတကွယ့်ကိုအဆင်ပြေနေသောအချက်ဖြစ်သည်ပေမယ်ရီစရာလည်းလူအတော်များများသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနမ်းခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်သောနမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်.
အများပြည်သူနမ်းနည်းလမ်းနှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုယူနိုင်ပါသည်နှင့်လူတစ်ဦးအပေါ် မူတည်. သင်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်, သင်ခြားနားချက်နှင့်သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုသိပါလိမ့်မယ်. တလမ်းတည်းဖြင့်သူတို့အနုတ်လက္ခဏာဘက်ဖြစ်သည့်တစ်စုံတစ်ဦးရှိသည်ဒါပေမဲ့သူတို့သင်တို့နှင့်အတူရှိကိုဂုဏ်ယူနှင့်သင်အတူတူဖြစ်ကြောင်းသိရှိထားသူဂရုမစိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကပိုပြီးအပြုသဘောဘက်ပေါ်ရှိအခြားသူများကိုဤကျင့်သောချွတ်ပြသရန်ဖြစ်သည်.
လူတော်တော်များများကချစ်ခင်စုံမက်၏တပြင်လုံးကိုအများပြည်သူ display ကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမယ့်သူတို့သည်သင့်ကိုမချစ်ကြဘူးလို့တော့မဆိုလိုပါဘူး. အများပြည်သူနမ်းလိုပဲကနည်းလမ်းနှစ်ခုကိုယူနိုင်ပါသည်သော်လည်းတဖန်သင်တို့နှင့်အတူဖြစ်ကြ၏လူတစ်ဦးအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်. သင်သည်သူတို့ပုဂ္ဂလိကပိုင်သင်သည်နမ်းနေကြတယ်ရှိမရှိသိရန်အဘို့အထိုသူတို့သည်မိမိတို့အအများပြည်သူ၌သင်တို့ကိုနမ်းစေခြင်းငှါသင်တို့အလုံလောက်မာနထောင်လွှားကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေထဲ၌ယုံကြည်သို့မဟုတ် PDA နဲ့အဆင်မပြေသူများသို့မဟုတ်မပေးတဲ့အတွက်ဒါဟာလွယ်ကူလိမ့်မည်.